प्रहरीको नयाँ आइजिपीमा सर्वेन्द्र खनाल, सशस्त्रमा शैलेन्द्र खनाल-को हुन् सर्वेन्द्र ? – Online National Network
प्रहरीको नयाँ आइजिपीमा सर्वेन्द्र खनाल, सशस्त्रमा शैलेन्द्र खनाल-को हुन् सर्वेन्द्र ?
२८ चैत्र २०७४, बुधबार ०३:२९
काठमाडौं, २८ चैत – नेपाल प्रहरीको नयाँ महानिरीक्षक (आइजिपी) मा सर्वेन्द्र खनाल छानिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले प्रहरीको नयाँ आइजिपीमा खनालको नाम चयन गरेको हो । आईजीपीका लागि सर्वेन्द्र खनालसँगै रमेश खरेल र पुष्कर कार्की दौडमा थिए । डीआईजी बढुवाको बरियतामा खनाल पहिलो, खरेल दोस्रो र कार्की तेस्रो नम्बरमा थिए ।
यस्तै, सशस्त्र प्रहरी तर्फ आइजिपीमा शैलेन्द्र खनाल चयन भएको समाचार स्रोतले बताएको छ । नेपाल प्रहरीको आइजीपीमा खनालसँगै, रमेश खरेल र पुष्कर कार्की प्रतिस्पर्धामा थिए।
नयाँ आइजिपी छनोट गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा म‌ंगलवारसाँझ प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल सहितको बैठक बसेको थियो । प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डको सहमतीमा नेपाल प्रहरी तर्फ बरिष्ठताका आधारमा सर्वेन्द्र खनाल छानिएका हुन् ।
०६२/६३ को जनआन्दोलनमा काठमाडौं प्रहरीको नेतृत्व गरेका खनालले संयमतासाथ काम गरेका थिए। मधेस आन्दोलनका क्रममा धनुषामा आन्दोलनकारीले सबै सरकारी कार्यालयलाई नियन्त्रणमा लिएपछि सरकारले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन खनाललाई नै खटाएको थियो। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखामा बस्दा खनालले गुन्डा नाइके कुमार श्रेष्ठ ‘घैंटे’ को इन्काउन्टर, फुटबलमा हुँदै आएको ‘म्याच फिक्सिङ’, पेट्रोलियम पदार्थमा हुँदै आएको ठगी, सञ्चार उद्यमी जमिम शाहको हत्या आरोपी जगदीश चन्दलाई नियन्त्रण, ललितपुरको बडिखेलमा १२ वर्षपहिले एउटै परिवारका ५ जनाको बीभत्स ढंगबाट भएको हत्याकाण्डको पर्दाफास, करोडौैं ठगी गर्ने युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल लिमिटेडका सञ्चालक विष्णुबहादुर क्षेत्री र कृष्णबहादुर क्षेत्रीलाई पक्राउ गरी ख्याति कमाएका थिए।
जागिरे जीवनमा उनले २२ वटा विभूषण र १२ वटा तालिम लिएका छन्। पछिल्लो कार्यकाल ट्राफिकमा रहँदा खनालले पशुपति, ठमेल र असन क्षेत्रमा चारपांग्रे सवारी निषेध गराएका थिए। उनी नेपाल प्रहरीको नीति निर्माण तह तथा व्यवस्थापकीय कार्यमा पोख्त मानिन्छन्।